Izingoma zonyaka omusha: iRussia nesiNgisi zanamuhla, izingane ezingesikoleni nasenkulisa. Thokoza izingoma ze-Myasnikova mayelana noNyaka Omusha ngamazwi namavidiyo
Ngokushesha, uhlobo lomkhulu uFrost luzoqala uhambo lwakhe olukhazimulayo emhlabeni jikelele nasemadolobheni, unikeza wonke umuntu izipho nezipho. Uzoba yini ngonyaka ka-2017 nokuthi uzosiletha kanjani - tshela izinkanyezi nezinkomba. Kodwa iholidi elinomdlandla kanye nomoya omuhle kungumsebenzi wezandla zethu. Ukushayela i-pleen ngaphambi kokuzalwa bese uthola okuhle, ulalele izingoma ezihle kakhulu zesiRashiya nesiNgisi mayelana noNyaka Omusha. Ezingxenyeni zomculo kungcono kakhulu ukuhlanza indlu ukufika kwezivakashi, ukuhlobisa umuthi ngezigqoko ezikhazimulayo, wenze izikhumbuzo ezenziwe ngezandla futhi ulungise ukudla okumnandi. Izingoma Zonyaka KaNcibijane Zonyaka Omusha wezingane kanye nentsha kubaluleke kakhulu njengendlela yokugqoka, ama-mandarin aphunga, amabhola aKhisimusi akhazimulayo. Ngempela, ngaphandle kwengoma yezingane ezinhle zonyaka omusha we-2017, ngeke kube khona umkhosi womndeni, noma umama omdala osalindelekile enkulisa nasezikoleni.
Ingoma yesiRashiya yendabuko ngoNyaka Omusha: umbhalo kanye nevidiyo
Lapho ihora lokugcina lonyaka omdala lingencibiliki, futhi kuze kube yilapho okulandelayo kuhlale imizuzu emihlanu kuphela, sikhumbula zonke izenzakalo ezedlule kanye nephupho lokufeza izimangaliso ezintsha, ukugcwaliseka kwezifiso ezithandekayo. Ngokuqinisekile wonke umuntu uyayazi ifilimu enhle ka-"Carnival Night" ka-Eldar Ryazanov ngo-1956, lapho uLyudmila Gurchenko ebizwa khona emhlabeni jikelele ngokusebenza kwengoma yaseRussia engokomzwelo mayelana noNyaka Omusha "Amaminithi amahlanu." Wonke u-Eva Wonyaka Omusha nezinkathazo, ithemba nokulindela . Akumangalisi ukuthi ingoma yaseRashiya yendabuko mayelana noNyaka Omusha nombhalo kanye nevidiyo "Amaminithi amahlanu" awazange adlulisele esinye isidlo sonyaka omusha. Ngizokuhlabelela ingoma cishe imizuzu emihlanu, Vumela le ngoma ihlabelele, Vumela ukuthi iqhume ekukhanyeni, ngikunike le ngoma, Le ngoma ingamaminithi amahlanu. Imizuzu emihlanu, imizuzu emihlanu, Ukulwa kwewashi kuzozwakala maduzane, imizuzu emihlanu, imizuzu emihlanu, Phinda uxhumane nalabo abaphikisanayo. Imizuzu emihlanu, imizuzu emihlanu, Qonda ukuthi ngabe kunjalo, Ngisho kule mizuzu emihlanu Ungenza okuningi. Imizuzu emihlanu, imizuzu emihlanu, Ukulwa kwewashi kuzozwakala maduzane, Hlanganisa labo abaphikisanayo. Ngehora sinezinyanga eziyishumi nambili kuya kwabahlanu, uNyaka Omusha usuvele usendleleni, Kithina, ugijimela ngesivinini esikhulu, Masinyane sizosho ukuthi "Unyaka Omusha Ojabulisayo", Ngehora leshumi nambili ngaphandle kwamahlanu. Unyaka omusha, akalindeli, Ukhona emngceleni, Amaminithi amahlanu azogijima, Kukhona ambalwa kakhulu asele. Mngane othandekayo, phuthuma, Akusizi ngalutho ukulahlekelwa amaminithi, Akushiwo, uthi, Ungayifaki isikhathi sonyaka. Mngane othandekayo, phuthuma, Okungashiwo, uthi, Ungavumeli unyaka. Emaminithini amahlanu abantu ngezinye izikhathi banquma ukungashadi noma yini, kodwa kwenzeka ukuthi iminithi yonke Into iyashintsha kakhulu, konke kuguqula kanye nhlobo. Unyaka omusha ususondele, ngifuna ukukufisela injabulo, Lapha ihlezi umfana, Amaminithi amahlanu ngaphandle kwenkosi. Emaminithini amahlanu, emihlanu, emihlanu, Usendleleni efanele, Umgwaqo omuhle. Amaminithi amahlanu, kancane kakhulu, Usezingeni elifanele, Umgwaqo omuhle. Vumela ukuthi baqoqe kulobu busuku futhi lapho Le ngoma yami cishe imizuzu emihlanu, Kodwa ngenkathi ngicula ingoma, imizuzu emihlanu kakade yahamba, uNyaka Omusha, amahora ayishumi nambili ayashaywa. Unyaka omusha ufika, Unyaka Omusha Ojabulisayo, ngenjabulo entsha, Isikhathi sisiphuthuma phambili, Unyaka omdala awusekho emandleni. Vumela konke okuzungezile ukuhlabelela, Futhi uphazamise ngokumomotheka kobuso, Ngoba yilo Unyaka Omusha, Ukuhlabelela nokuzijabulisa. Unyaka omusha uza, Unyaka Omusha Ojabulisayo, ngenjabulo entsha. Unyaka Omusha Ojabulisayo, ngenjabulo entsha.
Izingoma ezihle zezingane mayelana noNyaka Omusha (ngamazwi)
Kanye ne-tangerines, isihlahla sikaKhisimusi, izipho kanye ne-Snow Maiden, uNyaka Omusha uhlotshaniswa nezingoma ezijabulisayo ze-thematic. Sibabazi kusukela ebuntwaneni obukhulu, kodwa abalahlekelwa ukubaluleka okungapheli kithi kuze kube yilolu suku. Qondanisa izingane zakho nabangane abangabonakali bomculo bomkhosi wokuNyaka Omusha. Khetha izingoma ezinomusa kakhulu ngoNyaka Omusha wezingane ngamazwi nomculo omnandi futhi ufunde umbhangqwana wamaholidi asekhaya noma i-kindergarten matinees. Futhi emva - uzoba nomzwelo ukugcina indlela ingane yakho idansa ngayo ngasese, ihlabelela kuye ukuthi ingoma yomNyaka Wonyaka wezingane enomusa kakhulu. Umuthi omncane waseKhisimusi ubanda ebusika, Sithatha lesi sihlahla ekhaya. U-Belenky zainka herringbone wabuza: "I-Gingerbread ye-gingerbread ye-blue-coat": "Isihlahla sikaKhisimusi, isihlahla somswakama, ngizohamba nawe!" Igumbi lomuthi likaKhisimusi elincane lifudumele, I-hare ne-squirrel baphefumula egumbini. I-curl i-curl ewindwangu efasiteleni, Esikhathini esifudumele se-thawed tree somuthi kaKhisimusi kubonakala. Mangaki amabhola kaKhisimusi asembala, i-Pink gingerbread, izigaxa zegolide! Bangaki ngaphansi kwesihlahla sikaKhisimusi izingane ezincane! Ukuqhaqhaza, ukubetha, ukukhamuluka ngenjabulo: "Isihlahla sikaKhisimusi, isihlahla se-fir, izibani ezikhanyayo, ubuhlalu obuhlaza okwesibhakabhaka, isihlahla sikaKhisimusi, indandatho, i-Brisket yehla ngamandla, Siyizinhlanzi ze-chocolate! Simi ngaphansi kwesihlahla sikaKhisimusi emdansweni ojikelezayo. Kuyajabulisa, sizogubha uNyaka Omusha! "
Izingoma zezingane ezilula mayelana noNyaka Omusha enkulisa
U-Eva Wonyaka Omusha yisikhathi somlingo. Abantu abajikeleza emigwaqeni, bethengisa izinto eziningi, emashalofini kukhona izinhlobonhlobo zezikhumbuzo nezipho, izitaladi zigqoke ezigodini ezikhazimulayo, indlu ifika emthini omuhle kaKhisimusi. Kodwa ukugxilisa ingxenyeni engenazimpikiswano ezingapheli, ungaphuthelwa umoya wokukhanya womlingo osondelayo. Misa ibhizinisi lakho, bheka nxazonke, sekuyisikhathi sokwenza into ejabulisayo ngempela. Funda ngomntanakho ingoma yezingane elula mayelana Nonyaka Omusha we-enkulisa. Vumela izinyane lizenzele umama, wenze inombolo yakhe yokuqala ye-solo. Izingoma ezingcono kakhulu zezingane mayelana noNyaka Omusha we-enkulisa zikhetha kuqoqo lethu lwezingoma ngamazwi namavidiyo. Yizwa, othile ozayo, esheshayo esiteji Futhi ehlabelela ngokuthula ingoma yeholide? Gxuma efasiteleni, hlala uphinde ufihle. Lo nguGogo Frost nathi esilungile nxazonke. Wasebenza iminyaka yonke, ngakho-ke ngaphandle kokulibala Ku-Eva Wonyaka Omusha zonke izifiso zagcwaliseka. Leliholide lezimangaliso, izingane zithanda ngempela, Akekho oyoshiywa ngaphandle kwezipho. Futhi, i-eskrikhi yamaqhwa e-snow ehamba Emgwaqweni, Omunye uhamba ngesango, Angry, ukukhononda, Ukubonakala Konyaka Omusha obonakalayo emaphethelweni angaphandle, Bright endlini yethu Isihlahla sikaKhisimusi siyashisa. Umkhulu u-Frost yonke indlu yethu izohlobisa ngeqhwa. Emafasiteleni iphethini eluhlaza okwesibhakabhaka nge-watercolor, Unyaka omusha ufika, shaya iwashi nge-cuckoo Futhi uphazamisa ukukhalaza ngokushaya izinyembezi. Vumela umuthi we-firisha uvutha ngezibani, Ngo-Eva Wonyaka Omusha asikwazi ukudabuka Leli holide lemimangaliso ngeke lisenze sibe nesithukuthezi, Zonke izifiso, amaphupho azogcwaliseka ngokuqinisekile. Futhi, i-eskrikhi yamaqhwa e-snow ehamba Emgwaqweni, Omunye uhamba ngesango, Angry, ukukhononda, Ukubonakala Konyaka Omusha obonakalayo emaphethelweni angaphandle, Bright endlini yethu Isihlahla sikaKhisimusi siyashisa.
Amazwi engoma yamuva yonyaka omusha wekhonsathi esikoleni
Uma kunesikhathi esincane kakhulu ngaphambi koNyaka Omusha, futhi imizwa yokugcoba ayikugijimeli kuwe, lalela amagama ajabulisayo ingoma yonyaka wamanje. Kuzo uzothola ama-echoes esithwathwa seqhwa sasebusika, iziqephu zezintaba eziqhwaqhoqho, ukukhala kwamabhlolo omlingo, kanye nokukhala okuthulile kokufika kumlingo. Ekubambeni okunjalo komculo akunakwenzeka ukuba uhlale udabukile futhi ukhululekile. Futhi amazwi akhishwe ngekhanda ngengoma yonyaka omusha ngokuqinisekile ayoba usizo kubantu abadala etafuleni lokugubha kanye nezingane esikhonsathini esikoleni. Umzwelo wonyaka omusha namuhla, Sifunda imbongi ngokuzwakalayo ebusika. Unyaka Omusha usuvele uvele, umshayeli weqhawe uqale. Siphila nawe eminyakeni eminingi nezikhathi. Unyaka Omusha, Unyaka Omusha Ezinqabweni zeqhwa, Ingoma yamahora omdala Uphethe ukukhanya. Vumela inhlanhla thole Labo abakholwayo futhi balinde, Lokho isimangaliso izimangaliso - Year New! Futhi imizuzwana iyancibilika nge-snowflakes ekhanyayo, Futhi isikhathi sihleka nge-grimaces yengane. Kodwa zama, uthinte, ngaphambi kwami, phambili. Uyibamba okwesikhashana. Unyaka Omusha, Unyaka Omusha Ezinqabweni zeqhwa, Ingoma yamahora omdala Uphethe ukukhanya. Vumela inhlanhla thole Labo abakholwayo futhi balinde, Lokho isimangaliso izimangaliso - Year New! Unyaka Omusha, Unyaka Omusha Ezinqabweni zeqhwa, Ingoma yamahora omdala Uphethe ukukhanya. Vumela inhlanhla thole Labo abakholwayo futhi balinde, Lokho isimangaliso izimangaliso - Year New!
Izingoma ezijabulisayo zezingane kanye nentsha yoNyaka Omusha 2017: imibhalo namavidiyo
Isitoko sezingoma zonyaka omusha asikaze siphele. Zibhaliwe futhi zihlabelela kakhulu kangangokuthi ziyokwanela eziningana zezizukulwane kulolu chungechunge. Phakathi naleso sikhathi, abanye abantu abangenakho ukuhambela komculo omsindo akumele baholele amaholide omNyaka Omusha, kanti ezinye ukukhala ngezingoma zezinsimbi zivele ziphazamisekile. Ngisho noma ungahle uhlele ukulalela izingoma ezihle zezingane nabasha beNyaka Omusha 2017, bazokuthola! Esikhathini sokungenisa izitolo esitolo, emafasiteleni esitolo, emafasiteleni angomakhelwane, emakhadini okubulingisa, kumagagasi omsakazo nakweziteshi zethelevishini. Ngesonto lamaholide asebusika, izingoma zonyaka omusha ezijabulisayo zezingane nentsha zikhona yonke indawo. Isihlahla sikaKhisimusi, isihlahla sikaKhisimusi - iphunga lamahlathi. Udinga izingubo ezinhle. Vumela lesi sihlahla sikaKhisimusi Ngehora lesikhathi Wonke izinaliti zisisindisa, Siyajabula. I-Herringbone ithanda izingane ze-Jolly. Siyamema izivakashi kuleli holide. Vumela lesi sihlahla sikaKhisimusi Ngehora lesikhathi Wonke izinaliti zisisindisa, Siyajabula. Igatsha lomuthi we-Fur Green wave, Futhi, njengenganekwane, uNyaka Omusha uzofika! Vumela lesi sihlahla sikaKhisimusi Ngehora lesikhathi Wonke izinaliti zisisindisa, Siyajabula.
Izingoma zesiNgisi zonyaka omusha ngamazwi
I-American immortal hit "Jingle bells" yabhalwa uJames Lord Pierpont eminyakeni engama-60 edlule. Ekuqaleni, ingoma yesiNgisi yayibizwa kusukela emgqeni wesibili wombhalo othi "One Horse Open Sleigh" futhi yayihloselwe ukusebenza ngosuku lwe-Thanksgiving kubasontweni besonto lasekhaya laseGeorgia. Ekuqaleni ukubunjwa kwazuza impumelelo engakaze ibe khona. Futhi ekugcineni yaba enye yezingoma zesiNgisi zendabuko zonyaka omdala nezingokomfanekiso ngamazwi ajwayelekile kuwo wonke umuntu omdala nomntwana. "I-Jingle bell" yenziwa ngamakhulu amaningi abantu abazwakalisa umhlaba-u-Glenn Miller, uLouis Armstrong, uFrank Sinatra, uBoni M, u-Ella Fitzgerald, njll. Namuhla, lokhu nezinye izingoma zesiNgisi zonyaka omusha ngamazwi azithandwayo hhayi kuphela ensimini yezwe, kodwa futhi yonke iplanethi. Ukudabula ngeqhwa Ku-sleigh O'er oyedwa ovule amahhashi emasimini esihamba ngawo Ukuhleka yonke indlela; Amabellane nge-ring-tail ring Ukwenza imimoya ekhanyayo Kuyinto ejabulisayo ukugibela nokucula Ingoma yokulala ebusuku! O! I-Jingle bells, i-jingle bell, i-Jingle yonke indlela! Yeka ukuthi kujabulisa ukugibela, Ku-sleigh one-horse evulekile, hey! I-Jingle bells, i-jingle bell, i-Jingle yonke indlela! Yeka ukuthi kujabulisa ukugibela, Ku-sleigh one-horse evulekile! Ngolunye usuku noma amabili edlule ngicabanga ukuthi ngizothatha ukuhamba Futhi maduzane u-Miss Fanny Bright wayehleli eceleni kwami; Ihhashi lalilonda futhi linyene; Kwabikwa inkathazo; Wangena ebhange elikhuphukile Futhi savuka! I-Chorus. Usuku noma amabili edlule Indaba okufanele ngiyitshele ngiphuma eqhweni Ngase ngiwela emhlane wami; I-gent yayigibele Ngesigqoko sehhashi elilodwa evulekile ehleka lapho ngiphakamisa khona kodwa ngokushesha ngahamba! I-Chorus. Manje umhlabathi mhlophe Hamba lapho usencane Thatha la mantombazane kulobubusuku Futhi uhlabelele le ngoma yokubulala; Vele uthole i-bob-tailed bay amabili-amane njengoba isivinini sakhe simshaya kumuntu ovulekile futhi eqaqa! uzohola
Ingoma Yonyaka Omusha "Isihlahla sikaKhisimusi, amabhola, abaculi" - amagama nomculo
Endlini ngayinye ekupheleni konyaka omusha kunomngane waphakade weholidi - isihlahla sikaKhisimusi. Ngokuvamile kuhlotshiswe ngamathoyizi angacabangeki, ubuhlalu obumibalabala, izibani ezikhanyayo, amantongomane omlingo nama-cones ... nokunye okungekho emkhathini. Ematafuleni kubonakala ama-mandarine aphunga, amabhodlela amancane a-champagne, isaladi enhle futhi ehlonishwayo "Olivier". Indima engabalulekanga edlalwa ngumoya wayo wokugubha kanye nomfanekiso okhethwe ukugubha umkhosi, okwenza umuntu abe ngumlingisi wakhe. Zonke lezi zimfanelo, yiqiniso, zakha isimo esihle kakhulu sonyaka omusha. Kodwa ukuze uhambele ngokugcwele ezweni elimangalisayo, elingaqondakali lezinganekwane nemilingo, kubalulekile ukukhetha izingoma ezithambile nezihle ngoNyaka Omusha ohlwini lwadlalwayo ngokukhala komculo namagama anomusa. Isibonelo, ingoma Yonyaka Omusha "isihlahla sikaKhisimusi, amabhola, abahlaziyi." Isithwathwa seqhwa sishaya umuzi wami, Emigwaqeni umkhumbi usakazeka, ngithanda amaqhwa, Futhi amahlumela amnyama emahlathini. Kusukela ebusika, ungafihli, ungabaleki, Ngakho-ke, sizohlobisa isihlahla sikaKhisimusi, nama-oranges, ama-apula, i-ananas. Sizokufihla ngokuthula. Yeka. Unyaka omusha, unyaka omusha - isihlahla sikaKhisimusi, amabhola, abaqaphi. Unyaka omusha, unyaka omusha - i-Disco, inyoka. Unyaka Omusha, Unyaka Omusha - Zonke izipho ngaphansi komuthi. Vumela ukuhamba ngonyaka omusha Asifuni noma kuphi! U-Santa Claus uyamamatheka ngobuqili, Yini ayilungiselele yona? - lowo ngumbuzo! Yenza isifiso, ulale kahle - Futhi uzothola iPC entsha entsha! Chorus! Kusukela ku-pea ku-sleds kuya ku-somersault, Kumngane ohamba phambili ebunzini ne-snowball! Kodwa abangane abathukuthelanga, bangabhongo - Ukuqhuma ngaphambi komshado kuzokwenzeka zonke!
Izingoma ezijabulisayo zonyaka omusha 2017 kubantu abadala - imibhalo namavidiyo
Unyaka omusha noKhisimusi - lawo maholide ambalwa, okuyinto okunzima ukuyikhohlwa emsebenzini ogcwele futhi ongapheli. Ngisho noma ungazilungiseleli ngamabomu emasontweni ambalwa, imigwaqo ehlakaniphile, iqhwa le-creaking ngaphansi kwezinyawo zakho kanye namathoyizi aseKhisimusi ekhanyayo ku-counter ngayinye ngokuqinisekile kuzokukhumbuza umcimbi ozayo. Futhi futhi - izingoma zonyaka omusha ezijabulisayo zezingane nabantu abadala, zizwakala kusuka ku-kiosk ngayinye nefasitela elivuliwe kancane. Yiqiniso, ungakwazi ukuqinisa umlomo wakho ngephutha, ucele ukuthi ukushayisana nokuphuza kakhulu. Futhi ungalalela ngenjabulo izingoma ezihle zoNyaka Omusha 2017 kubantu abadala, ukuvusa ekujuleni komphefumulo wakho i-pre-holiday mood efanelekayo. Gcina usuku oluthile> Lezi zinsuku zihamba kahle kakhulu Ihora lesithathu Ngimi emaphaketheni we-Vesa amaphakheji namabhokisi Amanqamu aphefumulayo omnyaka omusha Emasitolo omngcele ongaphandle komuzi Kwakudingeka ukuthi ngithenge yonke into ngo-29 Engiyidonsa njalo ngonyaka kuze kube yi-Chorus engamashumi amathathu: Unyaka omusha, i-mandarin kimi umlomo uSanta Claus, u-Olivia ekhaleni lami Sibheka ukwelashwa kwe-TV Futhi ake sihambe sibheke izithako engizivusayo ngoJanuwari Bute chimes ekhanda lami Ubuso njengoba ngilungisa Nge-30 ngikhumbula lapho i-champagne ingavulwa okwamanje Futhi umklamo wezinkulungwane eziyisikhombisa awuphuliwe Uphi umakhelwane okwamanje? Ngomkakhe umKhoyili ongavunyelwe okwamanje A Ngiryuhoy akesabi Ukwesaba kunamantombazane encane Lapho ingane ingakhohliwe khona kodwa i-pea Isisindo se-mink asilahlekile Futhi i-petard yesigqoko sezimvu ayidutshulwa Ngizoyithatha esandleni sami NginguNarzan ngasekuqaleni Futhi ngizocabanga ukuthi: "Kungani ngingabhubhi, ngisemngqamuzaneni, ngamashumi amathathu? ! " Kungakhathaliseki ukuthi unyaka owedlule, uphela njengamanye okudlule: ukulindela okujabulisayo, imizamo enjabulo kanye nezingoma ezinhle zonyaka omusha wezingane, intsha kanye nabantu abadala. Yizingoma zoNyaka Omusha unyaka nonyaka ezisisiza ukuba sikwazi ukunciphisa izenzakalo ezishiya futhi zizovumelanisa nempumelelo emisha. Izingoma zesimanje zesiRashiya nezesiNgisi zango-2017 ngamazwi namavidiyo ngokuqinisekile zizosiza emaseni esikoleni nasenkulisa. "Isihlahla sikaKhisimusi, amabhola, abahlaziyi", "iSanta Claus" nezinye izingoma ongazitholayo kwi-portal yethu.
Siyakuhalalisela osebenza nabo oNyaka Omusha we-2017 - Okusemthethweni nehlekisayo ukuhalalisela evesini nasenkulumweni. Ama-Postcards kusebenza nabo oNyaka Omusha 2017 we-Cock
Ivesi kusukela ngoMeyi 9 wezilwane zakwaSuku lokuPhumela, ezincane, izinyembezi, izingane. I-SMS emfushane kusukela ngo-Meyi 9 evesini - ukuhalalisela ngabadala-nokhokho nogogo
Ungasusa kanjani ukulawula okungenayo kwabazali?
Ucabanga ukuthi lesi sitsha sasisetshenziselwa? Impendulo izokumangaza futhi ikuenze uhleke
I-Okroshka ku-sap ye-birch
I-Amoveo SPA - engcono kakhulu emzimbeni nasemphefumulweni
Usuku lwe-Creative Valentine luvezela usuku